सर्वश्रेष्ठ क्र्याप्स गाइड र रणनीति - Gambling Papa
1 क्रेप्स के हो?
2 कसरी क्र्याप्स खेल्ने?
3 क्रेप्स रणनीति चार्टहरू के हुन्?
4 शुरुआतीहरूको लागि क्रेप्स गाईड
5 क्रेप्स शर्त रणनीतिहरू
6 क्रेप्समा कसरी जित्ने?
7 क्र्याप्स सुझावहरू र युक्तिहरू
टाढा-टाढाबाट, व्यक्तिहरू क्यासिनोहरूमा सबै संसारभरि क्र्याप टेबलको वरिपरि हल्लाउँछन्। यदि तपाईंले पासालाई रोल गर्ने मौका कहिले पनि प्राप्त गर्नुभएन, त्यसोभए तपाईंले भन्न सक्नुहुन्न कि तपाईंले यो सबै हेर्नुभयो। कम से कम, हाम्रो विचारमा, क्याप्सिनमा क्र्याप्स सबैभन्दा रमाइलो खेलहरू मध्ये एक हो। जब तपाईं विचार गर्नुहुन्छ कि भीड कसरी चल्तीको तातो रेखाको बखत आउँछ, यो केवल शर्त राख्ने ’boutमा सोच्न मोहित पार्दछ।
एक लोकप्रिय क्यासिनो पासा खेल:
यसको मूलमा, यो खेल टेबुलमा पासाको एक जोडी फ्याँकिएको वरिपरि घुम्छ। अवश्य पनि, जब तपाईं यसमा तल झर्नुहुन्छ, त्यहाँ जटिलताको परतहरू थपिएका छन् यसलाई सहभागीहरूलाई रोचक बनाउन। जे होस्, त्यसले खेलको एकदम सरल आधारलाई हटाउँदैन। हाम्रोलागि, यसले सबै अझ प्यारो बनाउँछ।
पासाको नतीजामा बट्टा बनाउनुहोस्:
जहाँसम्म जुवा खेल्ने सम्बन्धमा, तपाइँ तपाइँको दलालहरु राख्नु हुन्छ के तपाइँ पासा पट्टि आउँछन् को लागी तपाइँले रोलिंग समाप्त गरे पछि। यदि तपाईंले सहि धारणा गर्नुभयो भने, तपाईंलाई ठूलो भुक्तानी हुने समस्याहरूको आधारमा पुरस्कृत गरिनेछ।
केही उपकरण आवश्यकताहरूका लागि क्यासिनो भन्दा बाहिर पनि लोकप्रिय: धन्यवाद
यस सबैको शीर्षमा, तपाईं सायद तपाईंको जीवनमा केहि खेलहरू भेट्नुहुनेछ, क्यासिनो बाहिर पनि। किनकि यसलाई खेल सुरु गर्न धेरै थोरै चाहिन्छ, यो घर भित्र अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय छ।
क्रेप्स के हो?
हामीले यस विषयको ’boutमा कविताको ’boutमा धेरै कुरा गर्यौं। यस तथ्यको सत्यतामा तल ओरालो गरौं। देशभरि क्यासिनोहरूमा, क्रेप्स भनिने एक लोकप्रिय खेल खेलाइन्छ। यो खेलको एक लामो र storied ईतिहास छ सम्पूर्ण मार्ग क्रुसेडको समय सम्म फैलिएको।
पुरानो युरोपेली खेलको सरलीकरण जोखिम भनिन्छ:
यो यसको आधुनिक नाम जान्नु अघि, क्रेप्सको पुरानो संस्करण यूरोपभरि बजाइएको थियो। जहाँसम्म रेकर्डहरू छन्, यो देखिन्छ कि यो खेल मध्यकालीन युगको पवित्र युद्धहरूको बखत कहिले देखा पर्दछ। एक पटक क्रुसेडरहरू उनीहरूको घर फर्किए पछि उनीहरूले उनीहरूलाई खेल पनि लगे।
१00०० को प्रारम्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा आविष्कार गरिएको:
त्यहाँबाट, खेल महाद्वीपमा मानिसहरू बिच बाउन्स भयो जब सम्म उनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसाई सरेन। त्यस बिन्दुमा, यसले अन्तिम अनुमतिहरू शुरू गर्‍यो। एकचोटि धूलो स्थिर भएपछि, यो क्र्याप्स भनेर चिनिन्छ। अन्तमा, यसले आज हामीले चिनेको फारममा आएको थियो।
यस दिनको लागि संसारभरि प्ले भइरहन्छ:
सयौं वर्षदेखि, मानिसहरूले यस रमाईलो गतिविधिमा भाग लिइरहेका छन्। बाटोमा, मानिसहरु सँग एक छ र जीवनभरि बाँच्नको लागि पर्याप्त भाग्यहरू हराउँछन्। यसको अन्तर्निहित अस्थिरताको बावजुद, यो एक चुम्बकीय आकर्षण हो जुन धेरै लामो समयसम्म वरिपरि भएको निश्चित देखिन्छ।
कसरी क्र्याप्स खेल्ने?
सुरू गर्न, तपाईंले टेब नजिक जानु अघि डोरीहरू सिक्नुपर्नेछ। अन्यथा, यो एक ताजा जन्म माछा शार्क बीच पौडी भइरहेको जस्तो छ। जबसम्म तपाईं आफ्नो चोरहरू खाई आनन्द लिनुहुन्न, हामी केही समय लिने सिफारिस गर्दछौं मौलिकमा स्किम गर्न।
पहिले, खेलको संरचनाको ’boutमा कुरा गरौं। तपाईं डाईको भूमिकाको आधारमा बेट्स राख्नुहुने हुनाले, त्यहाँ अन्य धेरै क्यासिनो खेलहरू भन्दा धेरै बढी सम्भावित परिणामहरू छन्। त्यसकारण, यो रोटेट मेमोरीको माध्यम बाट यो शिल्प मास्टर गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। जहाँसम्म, तपाईको कामको लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू एक पटक बस्नुभयो भने।
प्रत्येक राउन्डका लागि समान संरचना:
मुख्यतया, हामी खेलको संरचना को उपयोग हाम्रो पक्षमा नहुनुहोस्। जे होस् प्रभाव एकदम सानो छ, यसले ठूलो कुनै कुराको प्रभाव पार्दछ। यस्तो देखिन्छ कि तथ्या .्कमा पनि सानो विचलनले ठूलो संचयी प्रभाव सिर्जना गर्दछ।
क्रेप्स खेल्न चरण-देखि-चरण गाईड
राउन्डको सुरूमा, तपाईंको चिपहरू पास लाइनमा राख्नुहोस्: एक शूटरले पासा उठाए पछि सबैले टेबलमा केही चिपहरू राख्ने मौका पाउँछन्। यदि तपाईं यस बिन्दुमा एक शर्त राख्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पहिलो शर्त सफल हुन वा असफल हुनेमा शर्त दिन सक्नुहुन्छ।
त्यसो भए, शूटरले पासालाई रोल आउट गरी बाहिर आउन सुरु गर्दछ:
कसरी बेट्स राखिएकोमा निर्भरता, तपाइँ शूटरलाई कुनै विशेष नम्बरमा अवतरण गर्न रुट गर्नुहुनेछ। एक पटक उसले पासा छोडिदिए, तपाईलाई कुनै पनि चिप्स राख्नु हुँदैन।
यदि तपाईं पासमा शर्त लगाउनुहुन्छ भने, तपाईं पागल पनी एक win वा ११ देखाउँनुहुन्छ जित्न सक्नुहुन्छ: पासाले आफ्नो पकड छोडेदेखि श्रोताहरू अचम्ममा उभिए। भीड मौनता संग, पासा टेबल मा एक सर्वशक्तिमान प्रदर्शन मा पटक पटक। यदि तपाईंले सातमा एक शर्त राख्नुभएको थियो भने, त्यसोभए तपाईं आज रातको भाग्यशाली विजेताहरू मध्ये एकको रूपमा यस ठाउँबाट टाढा जानुहुन्छ।
जो पासमा शर्त लगाउँदछन् यदि हराउँदछ भने यसले २,,, वा १२ देखाउँदछ:
यदि तपाईंले लाइनमा पास नगर्ने मा शर्त लगाउनुभएको थियो भने, त्यसपछि तपाईंले पाइस भुईंमा हिर्काए पछि तपाईं बिल्कुलै भिन्न नतिजाको आशा गर्दै हुनुहुन्छ। मानौं तपाईंले शटसलाई सहि रुपमा बोलाउनु भयो, तपाईको भविष्यवाणी गर्ने क्षमताको लागि तपाईलाई प्रशस्त पुरस्कार दिइन्छ।
यदि शूटरले एक पोइन्ट नम्बर ल्याउछ भने, तब उसले पासा रोल गर्न जारी राख्छ: पोइन्ट पोइन्ट नम्बरमा जबसम्म पोइन्ट लैन्ड हुन्छ, तब शूटर खेलिरहन्छ। प्रत्येक बिन्दुमा तपाईसँग अर्को शर्त हाल्ने अवसर हुन्छ।
त्यहाँबाट ऊ रोलिंग गर्न जारी राख्छ सम्म उसले point मा आफ्नो पोइन्ट वा जमिनमा हिर्काउँछ: यो प्रक्रिया जारी रहन्छ जब सम्म उहाँ सात मा नउठेसम्म। खेलमा गति रोक्नको लागि केवल एउटा अर्को तरिका अवस्थित छ। यदि पासा आफ्नो पोइन्ट नम्बरमा अवतरण गरेको भए, खेल पनि बन्द हुने थियो।
क्रेप्स रणनीति चार्टहरू के हुन्?
अहिले सम्म, हामीले खेलको आधारभूत आधारभूत प्लस यसको इतिहासको अलिकता कभर गरेका छौं। अब हामी त्यहाँ धेरै अनुभवी जुवा खेलाडीहरूको लागि meatier विषयहरूमा जान सक्छौं। मानौं तपाईंले क्रेप्सको केहि राउण्ड खेल्नु भयो। जे होस्, तपाईले वास्तवमै के चाहानुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईको रणनीति सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउनु हो। यसैले, हामीले दिमागमा एउटा सिफारिश पाएका छौं। यदि तपाईंले उनीहरूको ’boutमा पहिले सुन्नुभएको छैन भने, तब क्र्याप्स रणनीति चार्टहरू दाहिने हातमा एक सच्चा गेम परिवर्तनकर्ता हुन सक्छ।
विशेष शर्तको लागि तपाईलाई नहुनु पर्ने चीजहरू देखाउँदछ:
संक्षेपमा, यी चार्टहरूले तपाइँलाई शूटरले पासा छोडि दिए पछि के हुने सम्भावना हुन्छ भन्नेको स show्ग्रह देखाउँदछ। अवश्य पनि, दिनको अन्त्यमा, यो अन्तमा सबै सम्भावनाहरू हुन्। यी चार्टहरू हातमा लिएर, तपाईं वास्तविक तथ्या .्कहरू प्ले गर्न आवश्यक तथ्या .्कहरूसहित सशस्त्र हुनुहुनेछ।
मानौं तपाईले पेटको भावना महसुस गर्नुभयो कि तपाईंको शूटर भाग्यमानी मानिस हो। यदि त्यसो भएमा, हामी सुझाव दिन्छौं तपाईको शर्त बिगत लाइनमा राख्नुहोस्। जबसम्म तपाईंको हिम्मत महान अन्तर्ज्ञान प्राप्त भयो, तब तपाईं त्यो नेतृत्व अनुसरणबाट एक टन कमाउनु हुनेछ।
अर्कोतर्फ, तपाईंको पेटले शूटरको बिरूद्ध शर्त राख्न भनेको थियो, त्यसो हो भने तपाईंले ब्याटलाई लाइनमा पास नगर्नुहोस्। यस तरिकाले, एक चोटि शूटरले आफ्नो छाप छोडेमा तपाईंले त्यसको पतनबाट लाभ उठाउनुहुनेछ। अर्को शब्दहरुमा, तपाई परिणामको पर्वाह नगरी तपाईसँग भन्दा धेरै टाढा जानुहुन्छ।
पासाको पहिलो रोल पछि, सम्भावित दांव को विविधता केहि एक बिट खुल्न सुरु। मानौं तपाईं कुनै खास नम्बरमा दिसा लगाउन चाहानुहुन्छ। जब त्यो केस हुन्छ, त्यसो भए तपाईले आफ्नो चिपहरू खेल मैदानमा सम्बन्धित स्थानमा राख्नुहुनेछ।
तपाईसँग हिटको लागि यी कठिन कठिनाइहरू हुन्। तसर्थ, यदि तपाइँ ती मध्ये कुनै एकमा सफल शर्त राख्नको लागि भयो भने, तपाईले लाइनमा राखिएको पैसाबाट अझ धेरै कमाउनु हुनेछ।
कठिनाइमा अर्को चरण उच्च, यी बेट्स सफलतापूर्वक राखिएको छ भने अझै ठूलो पैसा को भुक्तान गर्न को लागी गर्छ। जो मानिस केही जोखिममा रुचि राख्छन्, यी हामीलाई देखाउँछन् कि यसले कति राम्रोसँग भुक्तान गर्न सक्दछ जब तपाईं मौका लिनुहुन्छ।
एउटा रोल बेट्स:
निस्सन्देह, यी कम से कम सम्भावित भूमिकाहरू हुन् जुन तपाईले मैदानमा देख्नुहुनेछ। अझै, यदि तपाई रमाईलो रात बिताइरहनुभएको छ भने, ती मध्ये केही चिप्स राख्नु उचित हुन्छ। तपाईं जितेको अफ मौकामा, तपाईं यति थोरै लगानीबाट कत्ति धेरै कमाउनुहुनेछ भनेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। साँच्चै, यो कहिल्यै अचम्म मान्दैन।
शुरुआतीहरूको लागि क्रेप्स गाईड
क्रेप्स खेल्नु अपेक्षाकृत सीधा छ। त्यस कारणका लागि, यो शुरुआतीहरूको लागि प्राय: सिफारिश गरिएका खेलहरू मध्ये एक हो। जो मानिस क्यासिनो गएका छैनन् उनीहरू ढोका भित्र हिड्न थाल्छन् भ्रामक भावनाहरूले भरिएका।
यदि हामीले नजिकबाट हेर्‍यौं भने, ती भावनाहरू प्रकट हुनुको कारण यो प्रस्ट देखिन्छ। जब तपाईं एक्लो नहुनु सबै एक्लोमा हेर्दै हुनुहुन्छ, अझ धेरै अरू भन्दा डरलाग्दो देखिने छ यो पहिले देखि नै थियो।
यसैले, आधारभूतमा टाँस्नु खराब रणनीति होइन जब तपाईं पहिलो पटक सुरू गर्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाई कहिले पनि आत्मविश्वासको कमीको शिकार हुनुहुनेछैन जब तपाईं क्यासिनो भुइँमा हुनुहुन्छ।
भुक्तानीको सर्वाधिक बाधा सहित दांवहरूमा ध्यान दिनुहोस्:
सबैजनासँग एक समय थियो जब तिनीहरू शुरुवाती थिए, कसैलाई सही उत्तर थाहा छ भनेर मानिलिनु अन्याय हो जबसम्म उनीहरूले केही कौशलता प्रदर्शन गर्दैनन्। त्यस मामलामा हामी सुझाव दिन्छौं कि शुरुवातकर्ताहरू धेरै जसो ब्याजरहरूमा चल्छन्। प्रभावमा, तपाईले जित्न सक्ने खेलको संख्यालाई अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यो फरक तरीकाले भन्नु हो कि, यो हराउन नचाहने मानिसहरूलाई धेरै कम निराशाजनक हुनेछ।
कुनै सम्भावित शर्त नगर्न प्रयास गर्नुहोस् जबसम्म तपाईं खेलसँग परिचित हुनुहुन्न:
धेरै खेलहरूको साथ, तपाईको टाउकोमा चढ्नबाट जोगिनु उत्तम हुनेछ जब सम्म तपाईं केही राउन्डहरू देख्नुहुन्न। किनकि तपाईंले वास्तविक पैसा प्रयोग गरेर क्रेप्सहरू खेल्नुभयो, यो भिडियोभ्याममा हराउनु जस्तै होईन। एक पटक तपाईले टेबुलमा राख्नु भएको पैसा अदृश्य हुन्छ, तपाईलाई जोखिममा नराखीकन फर्किनु असम्भव छ। निस्सन्देह, एक ठूलो मोर्चा अनसुना को छैन। यद्यपि हामी तपाईको पहिलो भ्रमणको लागी एकमा निर्भर हुन सुझाव दिदैनौं।
रोलमा शूटरहरू नभएसम्म बेट्स राख्न प्रतीक्षा गर्नुहोस्:
याद गर्नुहोस्, तपाई जहिले पनि पहिले केहि राउन्ड पछि बाजी लगाउने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। खेल एक गतिशील अनुभव हो, यो तपाईं लाई एक सानो धैर्य गर्न लाड गर्न सक्छन्। पहिलो पालोमा राख्नुको सट्टा प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले पासा अलिकति तापो सम्म पर्खनुहोस्।
क्रेप्स शर्त रणनीतिहरू
एकचोटि तपाईंले यो निर्णय गर्नुभयो कि तपाईं अब पर्ख्न सक्नुहुन्न, तपाईं हेडफर्स्टमा डुबुल्की मार्नुहुनेछ। तपाईंलाई यस प्रकारको अवसर दिइसकेपछि, यो अनुहारमा पनी गाह्रो हुन्छ जब यो तपाईंको अनुहारमा तानिरहेको छ। त्यस कारणका लागि, हामीसँग मार्गदर्शन गर्न मद्दतको लागि हामीले केही सुझावहरू प्राप्त गरेका छौं तपाईंको पहिलो अनुभवमा लामो समय सम्म रहनेछ। अन्यथा, यो सबै एक साधारण बाधा को लागी तपाइँको यात्रा लाई बाधा को लागी सजिलो हुनेछ।
सम्भावित घाटा विरुद्ध हेजिंग:
र सबैभन्दा पहिला, हेजको कला सिक्नु प्रतिभाशाली जुवा खेलाडीको लागि आवश्यक सिद्धान्त हो। सबै कुरा लाइनमा राख्नुको सट्टा, तपाईंको केही सम्पत्ति बचाउन कोसिस गर्नुहोस्। यदि चीजहरू तपाइँको बिरूद्ध जान्छन् भने, तपाइँ तपाइँको बैंक खाता नलगाई बाहिर तान्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, एक पटक टेबल फेरी फर्किएपछि, तपाईं आफ्नो मान फिर्ता पाउनको लागि पछाडि फर्कन तयार हुनुहुनेछ। साथै, तपाईं पहिलो पटक छोड्नु अघि हराएको केहि पनि संधै गर्न सक्नुहुनेछ।
आक्रामक रूपमा सबै लागतमा नाफाको पीछा गर्दै:
अर्कोतर्फ, सबैजना यसलाई जहिले पनि सुरक्षितमा पाउँदैनन्। यदि तपाईं आफूलाई त्यस भीडको बीचमा गणना गर्नुहुन्छ भने, कसले तपाईंलाई आक्रामक खेलको लागि दोष दिन सक्छ? क्यासिनो पुगे पछि, एक रणनीति सकेसम्म चाँडो ठूलो जान हुनेछ। जबसम्म तपाईं सही कल गर्न प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, तपाईं रातको शुरुबाटै माथि चढ्नुहुनेछ। तपाईले टेबुलमा राख्नु भएको पहिलो ठूलो भएदेखि, ज्याकपोट को आकार तपाई एक पटक जित्नु भयो बराबर हुनेछ। ठूलो निस्सन्देह, यदि तपाईं त्यो पहिलो खेल हराउनुहुन्छ भने, तपाईंसँग तालमा फेरी एक पटक तपाईंले मेकअप गर्न त्यत्ति धेरै चीजहरू पाउनुहुनेछ। जबसम्म तपाईं घाटाको लागि पर्याप्त सहिष्णुता प्राप्त गर्नुहुन्न, यो राम्रो हो कि कम जेब्रेसी रणनीतिमा अडिग रहनु राम्रो हो जब सम्म तपाईंको जेब गहिरो हुँदैन।
क्रेप्समा कसरी जित्ने?
धेरै जसो भागका लागि तपाई टेबलको भित्तामा छोडिनुहुनेछ जब तपाई आफ्नो बाजी लगाउनुहुन्छ। त्यसोभए, ती बुद्धिमत्ता राख्नुमा अर्थ लाग्छ। तपाईंको नियन्त्रण समाप्त भए पछि एकपटक चिप्स बस्नुभयो, हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं तपाईंले तिनीहरूलाई राख्नु अघि आवश्यक पर्ने जति धेरै लिनुहोस्। यस तरीकाले, तपाईं प्रत्येक सेकेन्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भविष्यका सम्भावनाहरूको लागि सावधानीपूर्वक प्लट गर्न। पूर्वानुमानमा निर्भर गर्दछ कि तपाईको टाउकोमा, कार्यको सही मार्ग एकदम भिन्न हुन सक्छ। जबसम्म तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न तपाईको कार्य रोक्नुहोस्, तपाई यो निश्चित गर्नुहुन्छ कि हरेक खेल उद्देश्यले भरिएको छ। उद्देश्यपूर्ण नाटकहरू पेशेवरहरूबाट एमेच्योरहरू छुट्याउने प्रमुख कारक हुन्। तिनीहरूलाई अधिक बनाएर, तपाईं माथि लिगमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंले यो थाहा पाउनु अघि।
तपाइँका नाटकहरूको समय:
पहिले, तपाइँ कसरी समय पर्खने भनेर कसरी जान्ने जान्न चाहानुहुन्छ। तपाइँले यो बुझेको कुरा बुझाउँदै त्यस्तो सिद्धान्तको मूर्तता भन्दा धेरै सरल छ। यदि तपाईं अवधारणा बुझ्नुहुन्छ भने पनि, क्यासिनो फ्लोरका दृश्यहरू र ध्वनिहरूका बीचमा एक पटक चीजहरू भिन्न हुन्छन्। जबसम्म तपाइँले बेट्सलाई सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा कहिले राख्ने भनेर थाहा पाउनुहुन्छ, चिप्सले तपाइँको हात छोड्नु अघि जहिले पनि केही क्षण प्रतिबिम्बको लागि अनुमति दिनुहोस्। पेशेवरहरूको लागि अन्तिम-दोस्रो निर्णय गर्नु अनसुना छैन जुन अन्नको बिरूद्धमा बहन्छ।
केहि अवसरहरूमा, तपाईले भीडको उर्जामा उतारचढाव महसुस गर्नुहुनेछ किनकि रोलको बखत ज्वार परिवर्तन भयो। यदि तपाईं यस्तो पाली देखि भयो भने, यो संकेत हो कि समय नजिक छ। एकचोटि तपाईंले यस्तो महसुस गरिसकेपछि, हामी ती भावनाहरूलाई नमीठो पार्ने सल्लाह दिन्छौं। सामान्यतया, यसले तपाइँलाई टेबुलमा अचम्म तरिकाले टाइम शर्त सही तरीकाले राख्दछ।
ड्राइभरको सीटमा प्रवेश गर्दै:
अन्तमा, पासा आफैंमा नियन्त्रण गरेर, तपाईं चीजहरू के हुँदैछ भन्ने ’bout अझ राम्रो समझ पाउनुहुनेछ। जब तपाइँ चीजहरू कसरी सम्पन्न गरिनु पर्छ भनेर जानिसक्नुभयो, यसले आफैंमा उठ्दा चोट पुर्‍याउँदैन। जतिसक्दो चाँडो तपाई आत्मविश्वास महसुस गर्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई आग्रह गर्दछौं कि कम्तिमा एक पटक पासा प्रयोग गर्न। तपाईं क्यासिनोबाट बाहिर जानु भन्दा पहिले, सबैलाई क्र्याप्स तालिकामा पासाको जोडी फ्याँक्ने अवसर हुनुपर्छ। जब सम्म तपाइँले त्यो भावना महसुस गर्नुहुन्न, रमाईलो तपाइँको शब्दावलीको अंश पनि हुनुहुन्न। अर्को शब्दहरुमा, यो धेरै व्यक्तिहरु को लागी बरु अन्य संसारमा हुन्छ।
क्र्याप्स सुझावहरू र युक्तिहरू
हामी प्रस्थान गर्नु अघि, हामीसँग केहि थप सल्लाहहरू छन् जुन तपाईलाई व्यंग्यात्मक परिस्थितिहरूमा पनि फर्काउन मद्दत गर्न सक्छ। असंख्य सम्भावनाहरूको परिणामको रूपमा, साँझ कसरि जान्छ भन्ने निर्धारण निराशमा व्यायाम हो। निस्सन्देह, यसले रातको एक भन्दा बढी साहसी विचारहरू विफल पार्दछ। जे होस्, यसले कम्तिमा पनि एक प्रयास गर्नबाट धेरै व्यक्तिलाई असन्तुष्ट देखिँदैन। जब सम्म तपाईं रमाईलोले भरिएको एउटा साहसिक कार्यको लागि तयार हुनुहुन्छ, क्र्याप टेबलमा तल जाँदै गर्दै प्रत्येक चीजले अनुभव गर्नुपर्दछ। यसका अतिरिक्त तलका सुझावहरूका साथ, तपाईं ढोका प्रवेश गर्ने धेरै सुरुवातीहरू भन्दा धेरै तयार हुनुहुनेछ। यसैले तपाईलाई आश्चर्य लाग्दैन जबसम्म तपाईले निम्न कुराहरु सम्झनुभयो।
अभ्यास उत्तम बनाउँदछ:
सबै चीजहरूको रूपमा, तपाईले अभ्यासमा राख्नु भएको समयको मात्राले तपाई कति माहिर बन्नुहुन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ। अधिक समय तपाईं प्रशिक्षण खर्च, राम्रो तपाईं आफ्नो शिल्प मा हुनेछ। यदि त्यो बकवास क्रेप्सको खेल हुन जान्छ भने, त्यसोभए तपाईले त्यसमा केन्द्रित पर्याप्त समय खर्च गर्नु हुनुहुनेछ मानिसहरूले तपाईंलाई स्टुडिअड बोलाउनका लागि। यद्यपि यो गलत अर्थ लाग्ने जस्तो देखिन्छ तर यो कुनै चीज हुन सम्भव भएसम्म यति टाढा छ। अभ्यासको लागि यति धेरै समय खर्च गर्न मा, तपाईं यो निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि समय बिताएको पर्याप्त गुणस्तर हो। पियानो पाठ लिन बाध्य भएका कोहीले पनि तपाईंलाई अभ्यासमा कति प्रभावकारी अभ्यास गर्न सक्दछ जब तपाईं विषयमा ध्यान दिन सक्नुहुन्न। जबसम्म तपाईं मानसिक रूपमा उपस्थित हुनुहुन्न, धेरै लाभहरू प्रकट गर्न असम्भव हुनेछ जतिसुकै समय खर्च भए पनि।
यसमा प्रदर्शित असमानताहरू सहित चार्टहरू मध्ये एउटा प्रिन्ट गर्नुहोस्:
अवश्य पनि, यो खेलको लागि विकसित गरिएको प्रत्येक चार्टलाई सम्झन सम्भव छ। अझै, जानकारीको प्रशस्ततालाई विचार गर्दा, यो यस्तो देखिन्छ कि यो धेरै जसो हामी मध्येका लागि एकदम शक्तिशाली काम हुनेछ। यदि तपाइँ श doubt्का गर्नुहुन्छ कि तपाइँको मेमोरीमा केहि यस्तो काम गर्न लिन्छ, भने हामीले एउटा सुझाव पायौं जुन तपाइँको मोजा उडाउन सक्छ। जबसम्म यो ल्याउन सम्भव छ, चार्टहरू प्रिन्ट गर्न प्रयास गर्नुहोस् तपाईं क्यासिनो जानु भन्दा पहिले वा अनलाईन क्यासिनो मा खेल्नु भन्दा पहिले चार्टहरू प्रिन्ट गर्न प्रयास गर्नुहोस्। त्यसोभए, उनीहरूसँग बाहिर जब तपाईं टेबलको वरिपरि उभिनु हुन्छ। कसरी अधिक प्रभावी ढ play्गले खेल्ने भनेर गणना गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु भनेको क्यासिनो भित्र मानिसहरूले देखेका सबैभन्दा भद्दा चीजहरू होइनन्। हामी तपाईलाई यति धेरै कसम गर्दछौं, कम्तिमा।
उत्तम अनियमितताहरू एउटा शास्त्रीय प्लेस्टाइलमा धन्यवाद:
धेरै शुरुआतीहरूको लागि यो होइन कि तिनीहरू प्रभावकारी रणनीति बनाउन असमर्थ छन्। यो एक पटक तिनीहरू क्यासिनोको मैदानको बीचमा हुन्छन्, उनीहरूले आफूले सिकेको सबै कुरा तत्कालै दिमाग छोड्दछन्। निस्सन्देह, यस्तो उदाहरण अत्यधिक हदसम्म निराशाजनक हुनेछ। अझै, यस्तो देखिन्छ कि धेरै व्यक्तिले त्यस्तो चीजको अनुभव गर्छन् जस्तो कि अन्यथा आशा गरिएको थिएन। साथै, जब व्यक्तिहरू अनलाइन सेटिंग्समा क्याप्सनहरू खेल्छन्, समान प्रभाव एक तरीकामा प्रकट हुँदैन जुन लगभग देखिने रूपमा देखा पर्दछ। यद्यपि मानिसहरूले जिटरहरूको केहि रिपोर्ट गरे, तिनीहरू सामान्य अनलाइन खेल्ने बित्तिकै उनीहरू धेरै आराम पाएको महसुस गर्छन्।